Sing Swim Sway.....: ကုမ္မဏီက ကျင်းပတဲ့ ကွန်ဒုံးလက်တွေ့စမ်းသပ်ပွဲ လျှောက်ထားနိုင်
ကုမ္မဏီက ကျင်းပတဲ့ ကွန်ဒုံးလက်တွေ့စမ်းသပ်ပွဲ လျှောက်ထားနိုင်
Posted July 8th, 2007 by ThaDar in Phatpa.com
ကွန်ဒုံးထုတ်လုပ်သည့် ဩစတြေးလျ ကုမ္မဏီတစ်ခုက ၎င်းကုမ္မဏီက ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းအတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်သူများကို ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ အလုပ်သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကွန်ဒုံးစမ်းသပ်သူများအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ထားသည့် Durex Australia ကုမ္မဏီကြော်ငြာတစ်ခုတွင် သူနာပြုအ၀တ်အစား ၀တ်ထားသူ ရင်ထွားထွားနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံနှင့်အတူ ပြသကြော်ငြာခဲ့သည်။
အဆိုပါ အိပ်ရာခွင်စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သူများကို အခကြေးငွေပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း စမ်းသပ်သူ ၂၀၀ ကို Durex ထုတ် ပစ္စည်းတစ်ဘူးစီ လက်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အဆိုပါ စမ်းသပ်ကြသူများမှ ကံထူးရှင်တစ်ဦးကို ဘောနပ်စ်ဆုငွေ ဩစတြီးယား ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုမ္မဏီကပြောသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စမ်းသပ်သူများ အနေနှင့် ကုမ္မဏီ၏ပစ္စည်းများ အသုံးဝင်မှုနှင့် ခံစားမှုများကို ပြန်လည်၍ သတင်းပုိ့ရမည်ဟုဆိုသည်။ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံသားများက အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုအတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
New Delhi: Condom makers say it's the world's best job,a"sexecutive position".
An Australian company is seeking real life testers for its condom products. "Got what it takes to be an official condom tester?" asks an advertisement launched by Durex Australia next toaphoto ofabusty young woman inarevealing nurse's outfit.
The "bed-testing" position is unpaid, but 200 selected testers would be up for free pack of Durex products, plusabonus prize of $ 854 for one lucky winner, White said.
In return, testers would have to report back on the feel and performance of the company's products. The applicants can only be Australians, and would-be testers will be asked to explain why they should be considered. Humour would help in the application, Durex said
Labels: ရွှင်မြူးစရာ, Fun/Humor, အထွေထွေ